सञ्जय दत्तको प्रेममा पागल थिइन् माधुरी दीक्षित तर सञ्जयको त्यो एक गल्तीले एकाएक टाढा भएकी थिइन् माधुरी ! – Sunaulo Nepal TV
सञ्जय दत्तको प्रेममा पागल थिइन् माधुरी दीक्षित तर सञ्जयको त्यो एक गल्तीले एकाएक टाढा भएकी थिइन् माधुरी !
काठमाडौं- बलिउड फिल्म नगरीका लागि ९० को दशक निकै फलदायी मानिन्छ। जुन दशकमा माधुरी दिक्षित र सञ्जय दत्तको जोडी निकै चर्चित थियो । यो जोडीले निकै हिट फिल्म गरे जसबाट उनीहरु प्रेमको सुरुवात भएको थियो । तर उनीहरु चाहेर पनि जाडिन् सकेनन् ।
थानेदार, साजन तथा खलनायक गरी उनीहरुको लगातार तीन फिल्म हिट भएका थिए । उनीहरुको केमिस्ट्री देखेर मानिसहरु पागल हुन्थे।
फिल्ममा काम गर्दागर्दै माधुरी र सञ्जय वास्तविक जीवनमा एक–अर्कालाई प्रेम गर्न थालेका थिए। तर, सञ्जय पहिले नै विवाहित थिए र उनको एक छोरा पनि थिए। लामो समयसम्म चलेको उनीहरुको प्रेमले मुर्त रुप लिन सकेन् ।
सन् १९९३ मा भएको मुम्बई घटनापछि नयाँ मोड लियो। यस मामलामा सञ्जय दो षी देखिएपछि माधुरी सञ्जयबाट टाढा भइन् । अहिले सज्जय पत्नी मान्यता सँग खुशी साथ जीबन बिताइरहेकी छन् । भने माधुरी पनि आफ्नौ बैबाहि जीबनमा निकै खुशी छन् ।
Next श्रीमान रणवीर बराबर पारिश्रमिक मागेपछि भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘बैजु बावरा’ मा दीपिकालाई हटाएर आलियाको इन्ट्री